XOG Erdogan Qaabku u Bahdiley "Faransiiska Dowlad Argagixiso Ah"Aamuska Sucuudiga ee Muslimka. - Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
HomeMaqal Iyo MuuqaalXOG Erdogan Qaabku u Bahdiley “Faransiiska Dowlad Argagixiso Ah”Aamuska Sucuudiga ee Muslimka.
October 26, 2020 marqaan Maqal Iyo Muuqaal, Wararka Maanta 0
Emmanuel Macron ololihiisii ​​adkaa ee ka dhanka ahaa Islaamka iyo Muslimiinta , Waa wax Ku Qotoma cunsuriyad salka ku haya maskaxda Faransiiska Ku Dhisan Yahay. Waa dhibaato ka taagan qiyamka Faransiiska ee aan ahayn Islaamka.
Maaddaama ay tahay dowlad cilmaani ah, Faransiisku ma doonayo inuu Islaamka u aqoonsado diin, xitaa isagoo ka soocaya dowladda, sidii ay ku sameysay diinta kiristaanka sanadkii 1905. Faransiiska ayaa u haysta muslimiintooda dhibaato; iyagu Muslimintu waa kuwa ku soo xadgudbay oo aan ku dhex milmi karin bulshada Faransiiska iyo dhaqankeeda.
Dawladdu waxay mamnuucaysaa magacaabista muslimiinta ee hay’adaha kala duwan ee dawladda, iyadoon loo eegin aqoontooda iyo kartidooda, in kasta oo ay jiraan in ka badan lix milyan oo muwaadiniin Faransiis ah oo ka soo jeeda muslimiinta.
Muslimiin badan oo faransiis ah ayaa ku dhashay kuna barbaaray dalkaasi, Awoowayaashoodana Waa Kuwa faransiisku u isticmaalay guushii uu ka soo hooyay wadamadii uu gumaysan jiray, isla markaana difaacay intii lagu guda jiray labadii dagaal aduunka.
Faransiiska Ayaa Dhigay Sharci Musliminta In la Dajiyo Goobo faqiir ah oo ku yaal bannaanka magaalooyinka waaweyn ee Faransiiska, si loola dhaqmo cunsuriyad nacayb leh markay tahay shaqo, daryeel caafimaad iyo waxbarasho.
Cunsuriyada faransiiska iyo sarraynta cadaanka ayaa ku badan bulshada dhexdeeda waxaana Musliminta Lagu Takooray muuqaalka guud ee siyaasadeed, laga bilaabo Siyaasada midigta ilaa bidixda oo Ka Siman Yahiin Islaam Nacaybka .
Ma jiro wax farqi ah oo u dhexeeya iyaga Kooxaha Siyaasada. Xusuusnow, tusaale ahaan, Shak Shiraak Jacques Chirac, Madaxweynihii hore ee hantiwadaagga ee Faransiiska. Sannadkii 1991, wuxuu u qalbi qaboojiyey shaqaale caddaan ah oo ku dhex noolaa muhaajiriinta Carabta iyo Afrikaanka ah, wuxuuna Sheegay Xiliga Madaxweynaha Faransiiska Inuu la yaabay sida ay ugu dul qaadan karaan cadaanku urkooda aan fiicnayn iyo buuqa khalkhalka leh ee Carabta . Erayadan cunsuriyadda iyo aflagaadada ah waxay la kulmeen taageero ballaaran oo caan ah; kii ugu horeeyay ee u sacaba tuma ereyada Chirac wuxuu ahaa hogaamiyaha midigta cunsuriga ee National Front waqtigaas, Jean-Marie Le Pen.
Xaqiiqdii, hadalka madaxweynaha Faransiiska aad ugama duwana hadalkii uu yidhi wasiirka arrimaha gudaha ee midigta-fog Gerald Moussa Darmanin markii uu cadho iyo naxdin ka muujiyay dhawaanahan ,qaybo gaar ah oo loogu talo galay cuntooyinka xalaasha ah ee bakhaarada ku yaal Faransiiska. . Wuxuu tilmaamay in, sanadihii la soo dhaafay, dowladda Macron ay xirtay 358 xarumood oo muslimiin ah, oo ay ku jiraan masaajiddo, ayna musaafurisay 480 ajaanib ah. Wasiirkani Faransiiska Awowgiis wuxuu ahaa Aljeeriya, habka, aad ka Aragto magaciisa dhexe ee Mussa. Wasiirka Wuxuu ka Mid Yahay Dadka Badaley Diintooda Iyo Dhaqankooda ee Xilka Ku Helay.
Arinta faransiiska ee diinta islaamka, ma ahan mid ugub ah, kamana soo Bilaaban dilkii macalin iskuul oo ku jees jeesay nabi Muxamed NNKH. Bare ahaan, waxaa macquul ah in laga filaayey Inuu Ogaado Macalinka , waxa ay aaminsan yihiin ardaydiisa da’da yar markii uu qorsheynayay casharradiisa, laakiin wuxuu sida muuqata go’aansaday inuu ka hadlo oo muujiyo majaajillada Charlie Hebdo ee Ku Aan baxday Sawir Xumaynta islaamka .
Waxaa la soo sheegay ,inuu u sheegay ardaydiisa muslimiinta ah inay ka baxaan fasalka haddii ay dhibsanayaan. Aaway sinnaantii loo heli lahaa waxbarashadda markii taa la sameynayay?
Tani waa dhibaato xidid ku ah bulshada faransiiska isla markaana gumeystaha yar ee doqonka ah ee Macron . Wuxuu go’aansaday inuu bahdilo Muslimiinta oo uu kiciyo dadka iyaga ka soo horjeeda ee Faransiiska, iyo , abuurista jawi colaadeed. baaqa ah in la gubo masaajidda ayaa ah muuqaal ka mid ah cunsuriyadda nacaybka leh ee madaxweynaha Faransiiska.
Mas’uuliyiinta Faransiiska ayaa u isticmaalay dhacdadan inay ka faa’iideystaan, iyagoo bilaabay olole waali ah oo xagga amniga, siyaasadda iyo warbaahinta ah oo ka dhan ah Muslimiinta.
weerarada lagu qaado dadka caadiga ah ee Musliminta ayey sii wadi karaan oo aysan jirin cid u joogta inay difaacdo dhibbanayaasha. Marka lagu daro xadgudubyada garabka midig ee ka dhanka ah muwaadiniinta muslimiinta Faransiiska, waxaan aragnay masaajidyo, iskuulo iyo dukaamo la xiray iyadoo lagu marmarsiyoonayo la dagaalanka argagixisada “Islaamiyiinta”.
Macron wuxuu ku dhawaaqay bilowgii bishaan – kahor intaan la dilin macallinka – dejinta sharci lagu abuurayo “Musliminta Faransiiska ” si loola dagaallamo waxa uu ugu yeeray “gooni u goosadka Islaamka”, isagoo shuruudo ku xiraya ururada iyo muwaadiniinta si loo hubiyo cilmaaniyaddooda.
Afkaarta shirqoolku waxay dhihi karaan in dilka macalinka uu ahaa howl been abuur ah oo laga soo abaabulay Cunsuriyada Faransiiska “Si loo cadeeyo” qoraalka Macron ee ku saabsan in Islaamku ku jiro “dhibaato”. Taasi waxay sharrax ka bixin kartaa sababta Ninka Dhalinyarada ee Lagu Eedeyey Dilka Macalinka oo dilay halkii laga qaban lahaa oo la xiri lahaa, oo maxkamad dadweyne la saari lahaa,Runta Si uusan u Sheegin Wiilkaasi.
Waxaa mudan in la isbarbardhigo dhacdadii Faransiiska iyo jawaabta wixii ka dhacay Christchurch, New Zealand sanadkii hore, markii nin dhalinyaro xag jir ah oo lagu magacaabo Brenton Tarrant uu toogtay dadkii ku cibaadeysanayay Masjidka Al-Noor iyo Xarunta Islaamiga ah ee Linwood, halkaas oo lagu dilay laguna dhaawacay in ka badan 100 qof oo Muslimiin ah.
Booliska New Zealand ayaa qabtay oo xiray dambiilaha; Waxaa La Geeyey maxkamad wuxuuna hada ku jiraa xabsi isagoo ku xukuman xabsi daa’in. Faransiiska gudahiisa, gacan ku dhiiglihi isla markiiba waa la ciribtiray, runtuna way la dhimatay isaga, iyadoo abuurtay jawi ku habboon siyaasiyiinta inay ku sheegaan hadalo xanaaq xambaarsan oo ka dhan ah Musliminta .
Macron wuxuu si cad u ogyahay in caannimadiisa ay sii yaraaneyso sababo la xiriira fashilaadiisa siyaasada gudaha iyo dibada, sidaa darteed wuxuu ka Door Bidayaa Inuu Guul Daraysto Inuu Dagaal Diimeed Dhaco.
Aynu sidoo kale isbarbar dhigno doqonnimada Macron ee hurinta nacaybka iyo dulqaad la’aanta bulshada dhexdeeda, iyo sida Raiisel wasaaraha New Zealand Jacinda Ardern ay ugu xallisay dhibaatada dalkeeda Si caqli ku dheehan tahay. Waxay kasbatay ixtiraamka dadka adduunka oo dhan, muslimiinta iyo kuwa aan Muslimka ahaynba, dadnimadeeda sida ay u daryeesho muwaadiniinteeda una ixtiraamto caqiidadooda.
Islaam nacaybku wuxuu ku qotomaa bulshada Faransiiska, siyaasiyiintuna waxay ku kobciyaan halku dhigyo been abuur ah sida xorriyadda hadalka, xuquuqda aadanaha, iyo “qiyamka jamhuuriyadda”, iyo adeegsiga cilmaaniyadda.
Nuxurka arintan ayaa iska indhatiraya oo xitaa dhiiri galinaysa takoorka iyo cunsuriyada lagu hayo dadka muslimiinta ah iyo dadka kale ee laga tirada badan yahay. Macron waxaa laga yaabaa inuu ku wacdiyo xoriyada hadalka, xuquuqda aadanaha iyo qiyamka jamhuuriyada, hadana wuxuu diiday diidmo kasta oo muujineysa aqoonsiga islaamka ee muwaadininta faransiiska ah ee muslimka ah.
Faransiisku wuxuu taariikh ku leeyahay runtii rabshad aad u xun oo ka dhacday dalalka Carabta iyo Afrikaanka ee uu gumeystay.
Faahfaahinta looma baahna in dib looga sheekeeyo; Faransiisku wuu diidi karaa , laakiin qaar badan baa weli nool oo markhaati ka ahaa argaggixisannimada Faransiiska. Xaqiiqda ka dambeysa khiyaanada ayaa ah in Faransiisku waligiis uusan noqon wadan ilbax ah, laakiin uu yahay meel aan loo dulqaadan karin, cadaalad daro iyo mugdi.
Balse Xanaaqa Macron Ayaa Ah madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan si uu u xasuusiyo Faransiiska waayihiisii ​​ceebta ahaa.
Waa madaxweynaha kaliya ee dunida muslimka ee difaacay diinta islaamka iyo muslimiinta, ugana digay Macron aflagaadeynta caqiidada in ka badan bilyan qof. Erdogan ayaa sidoo kale sheegay in hadalka Macron ee ku saabsan dib u qaabeynta diinta Islaamka ay muujineyso aqoon la’aantiisa isla markaana dhigiisa Faransiiska ay tahay in “maskaxiyan la baaro”.
Erayada Erdogan ee Turkiga ayaa umuuqda kuwa xasiliyay quluubta malaayiin muslimiin ah xili madaxdooda ay hoos u dhigeen iyagoo ku fashilmay difaaca diinta islaamka iyo nabiga calayhi salaatu wasalaam. Hogaamiyayaashoodu eray ugama dhawaaqin jawaabta hadalada aargoosiga ah ee umuuqda inuu doonayo dagaal diimeed.
Hogaamiyaal badan oo islaam Ah Ayaa Mooda Inuu Macroon Caynayo Kuwo kale Markuu islaamka caynayo balse Erdogan Ayaa og Inuu Isaga Caynayo Macroon markuu islaamka caynayo Taasina Waa Sida Hogaamiye Kasta Isagu Naftiisa Ugu Arko Cida uu Matalo,Erdogan Wuxuu Arkaa Inuu islaamka Matalo Sucuudiga Wuxuu isku Arkaa Inuu Naftiisa Matalo.
Waxaa Qoray :Mohamed Shiine
Raysal wasaaraha Pakistan oo Weerar Culus Ku Qaaday Madaxweynaha Faransiiska Iyo Dacwad Ka Macron